Cameron: Britain waxay wajahaysaa dooq muhiim ah - BBC Somali
Cameron: Britain waxay wajahaysaa dooq muhiim ah
19 Juunyo 2016
Image caption David Cameron ayaa doonaya in Britain ay baaqi ku ahaato Midowga Yurub.
Ra’iisul wasaaraha Britain, David Cameron, ayaa sheegay in dalkiisa uu wajahayo “kala doorasho jiritaankiisa ku dhisan” ayadoo 23-ka bishan ay dadka dalkaasi u dareerayaan aftida ka mid ahaanshaha ama ka bixida Midowga Yurub.
Mr Cameron ayaa sheegay in natiijada aftida ay noqon doonto mid aan ka laabasho lahayn.
Ra’iisul wasaaraha ayaa intaa raaciyay in haddii dadka dalkaasi ay u codeeyaan in Britain ay ka baxdo Midowga Yurub, uu go’aankaasi noqon doono khaladkii ugu weynaa ee ay galaan, isla markaana ay ka dhalanayso hubaal la’aan sanado socota.
Dhanka kale, Michael Gove, oo xubin muhiim ah ka ah kuwo u ololeynaya in Britain ay ka baxdo Midowga Yurub, ayaa shacabka dalkaasi ugu baaqay in ay “u codeeyaan dimuqraadiyada” ayna aftida Khamiista dhacaysa ku go’aamiyaan bixitaanka Britain ee Midowga Yurub.
Ololaha aftida ayaa dib u bilowday, ka dib markii muddo 3 maalmood ah loo hakiyay dilkii loo geystay xildhibaan Jo Cox.